Iran oo dalbatay laba arrin kahor wada-hadallada Mareykanka la galayso | Dayniile.com
Home Warkii Iran oo dalbatay laba arrin kahor wada-hadallada Mareykanka la galayso
American and Iranian flags waving at opposite directions over blue sky. Horizontal composition with copy space.
Iran ayaa Isniintii dalbatay in dowladda Mareykanka ay siiso damaanad qaad la xiriira inaysan ka bixi doonin heshiiska Nukliyeerka 2015, haddii ay guuleystaan wada-hadallada dib loogu soo nooleynayo heshiiska.
Wada-hadallo aan toos aheyn oo u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka, oo hakad uu ku yimid bishii June kadib doorashadii madaxweynaha Iran Ebrahim Raisi, ayaa lagu wadaa inay 29-ka November dib uga billowdaan Vienna, si loo helo hab dib loogu dhaqan-gelin karo heshiiska.
Heshiiska ayaa baaba’ay 2018, markii madaxweynihii hore ee Iran Donald Trump uu ka baxay islamarkaana dib usoo rogay cunaqabateenadii laga qaaday Iran, taasi oo horseeday in Tehran ay jebiso xadidaaddii la saary kobcinta macdanteeda uranium-ka.
“Dowladda Mareykanka waa inay muujisaa inay awooddo inay damaanad qaado inaysan mar kale heshiiska ka bixi doonin, hadidi wada-hadallada dib loogu soo nooleynayo ay guuleystaan,” waxaa sidaas yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Iran Saeed Khatibzadeh oo shir jaraa’id qabtay.
Waxa uu sidoo kale dalbaday in Washington ay hanaan la xaqiijin karo ku qaado dhammaan cunaqabateenada ay saartay Iran, islamarkaana “ay qirato qaladkii ay heshiiska ku jebisay.”
Diblomaasi reer galbeed ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in haddii Iran ay dalbaneyso damaanad qaad iyo in laga qaado dhammaan xayiraadaha, aysan markaas dhab ka aheyn wada-hadallada.
Khatibzadeh ayaa sheegay in Ali Bagheri Kani, oo ah wada-xaajoodaha Nukliyeerka Iran, uu toddobaadkan u safri doono saddexda caasimadood ee dalalka Yurub ee qeybta ka ah heshiiska Nukliyeerka.
Previous articleGoobaha lagu qabanayo doorashada Golaha Shacabka oo la soo bandhigay
Next articleSoomaalida Sweden oo ka faa’iideystay mashruuc lagu toosinayo ubadka
At least 37 people have died in a ferry fire in...
According to officials, a large fire swept through a river ferry in southern Bangladesh early Friday, killing at least 37 people and injuring 72...
The Crown Prince of Abu Dhabi meets with Morocco’s Prime Minister.
According to a Saudi delegate to the United Nations, international apathy...
Ra iisal wasare Rooble oo Caawa kulahadlay aalada Fogaansha madaxda maamul...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo warqadaha...